I-Avocado Cottage II - I-Airbnb
I-Avocado Cottage II
Budhanilkantha, Central Development Region, i-Nepal
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Shivaram
I-Avocado Home iyinkimbinkimbi enkulu ehlanganisa amakotishi amathathu nefulethi elilodwa:
I-Avocado Cottage I
Ukwatapheya Cottage III kanye
Ukwatapheya enamagumbi amabili okulala.
I-Avocado Cottage II, iyindlu yokulala enefenisha ephelele enazo zonke izinsiza. inendlu yokugezela enamathiselwe, igumbi lokuhlala elinefenisha, ikhishi elihlomele kahle kanye nendawo yokudlela. Itholakala engxenyeni esenyakatho yedolobha endaweni ethule ebheke intaba iShivapuri. Ifanele izithandani ezithanda ukuthula.
Ikotishi likakotapheya lisendaweni nje yokuhlala endaweni ethule. Ngokwesiko lama-Nepali, kunesisho esithi "ATHITI DEVO BHABA" esisho ukuthi 'Izivakashi ziwuhlobo lukaNkulunkulu'. Ngakho-ke, sizinakekela kahle izivakashi zethu. Ukunethezeka kwakho kuyinto eza kuqala kithi futhi ukwaneliseka kwakho kuwukukhathazeka kwethu. I-Avocado Cottage ihlezi endaweni enkulu enendawo enweba u-3000 sq m, enomhlaba omuhle. Lokhu kufana nendlu yasepulazini kodwa akuyona indlu yasepulazini ephelele. Kunezitshalo eziningi, ingadi, amadada, ichibi lezinhlanzi, izimbuzi, njll. Ingadi enkulu enezihlahla nezihlahla ikuvumela ukuthi uphefumule umoya omusha nohlanzekile okuyilungelo edolobheni elingcolile njengeKathmandu.
I-Avocado Cottage II itholakala endaweni engaseNyakatho yedolobha laseKathmandu ebangeni elingu-3.1 Kms ukusuka eNarayangpal Chowk ubheke eBudhanilkantha. Kunezindawo zokungena ezimbili ezinkulu ezakhiweni eyodwa ekamnikazi wendawo kanti enye ikuholela ekotishi I no-II yale ndawo. Kukhona nezindawo zokupaka ezihlukene zabaqashi kanye nomnikazi wendawo oqinisekisa ubumfihlo bezivakashi. Kunezinhlelo zokuvikela ezanele.
I-Cottage ifakwe ngokuphelele futhi ihlotshiswe kahle. Igumbi lokulala linombhede olingana no-Queen onomatilasi abangu-8 amayintshi we-spring kanye nemicamelo enethezekile. Iphansi linokhaphethi. Kukhona indlu yokugezela enamathiselwe enamathayela amahle aneshawa eshisayo nebandayo ngaso sonke isikhathi. Sihlinzeka ngamasethi angu-2 elineni namasethi angu-2 amathawula kodwa asizihlinzeki ngezinto zokugeza.
Indawo yokuhlala ifakwe ngosofa we-bamboo onamakhushini afanelekile kanye nokhaphethi waphansi. Kukhona ikhishi elihle nelihle elinendawo ye-counter slab yokupheka kanye namakhabethe ezitsha. Ifakwe nesiqandisi, isitofu segesi, i-toaster, ihhavini ye-microwave, ijeke yokushisisa amanzi nezinye izitsha uhlu oluphelele oludingekayo ekhishini.
Kunendawo yokudlela enhle enetafula lokudlela elincane nezihlalo zabantu ababili. Indawo yokudlela iyindawo ekhethekile ebuka ngaphandle kokuluhlaza ngenkathi udla. Inikeza injabulo yangempela futhi yenza ukuhlolwa kwakho kokudla kube okukhethekile. Kunomnyango ovuleka ngemuva kwegceke lapho kuhlezi khona engadini enefenisha yasengadini. Noma ngabe ngubani oke waba yizivakashi zethu baye bajabulela ikotishi lethu, baye bazisa kakhulu inkonzo yethu nenduduzo yethu. I-Cottage yethu yinhle kakhulu futhi ihlukile. Yiba isivakashi sethu futhi wenze uhambo lwakho lukhumbuleke. Empeleni, leli kuyilungelo elikhulu ngentengo ephansi kakhulu....
Sinendawo evikelekile futhi evikelekile. Ungabona uhla lwezintaba ze-Shivapuri ukusuka ekotishi. Kukhona igrosa ekuhambeni kwemizuzu emihlanu kanye nesitolo esikhulu ekuhambeni kwemizuzu eyishumi. Ukuhamba ngezinyawo kuneShivapuri National Park eseduze nje. Kukhona futhi ithempeli laseBudhanilkantha elaziwa nangokuthi unkulunkulu olele, indawo yenkolo yamaHindu eduzane. Idolobha lasendulo iTokha liyabonakala endaweni eyimizuzu engama-20 ukusuka endaweni. Kuningi okunye ongakuhlola kule ndawo.
Njengoba kushiwo ngaphambili ukwaneliseka nokunethezeka kwesivakashi sethu kuwukukhathazeka kwethu futhi kubaluleke kakhulu, ngakho-ke, sihlala sisenkonzweni yaso. Siyathanda ukusebenzelana nezivakashi zethu sikhumbula ubumfihlo bazo. Sihlala endaweni efanayo futhi sihlala sifinyeleleka kubavakashi bethu.
Njengoba kushiwo ngaphambili ukwaneliseka nokunethezeka kwesivakashi sethu kuwukukhathazeka kwethu futhi kubaluleke kakhulu, ngakho-ke, sihlala sisenkonzweni yaso. Siyathanda ukuse…
Hlola ezinye izinketho ezise- Budhanilkantha namaphethelo